आइतबार यस्तो छ विदेशी विनिमयदर, हेर्नुहोस् कुनको कति ? | News Polar
न्यूजपोलार बैशाख ०५, २०७८, आइतबार
काठमाडौं । आइतबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर घटबढ भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १८ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ २७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६३ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६४ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ। एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २९ रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९७ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९९ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ । बहराइन एकको खरिददर ३ सय १४ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ३ सय १६ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ ।
कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ६५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ७१ पैसा तोकिएको छ । जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ९० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ९६ पैसा तोकिएको छ ।
# विदेशी विनिमयदर
प्रकाशित : बैशाख ०५, २०७८, ११:२४:५७
कोरोना कहर: सुरक्षित रहँदै व्यवसाय गर्न आग्रह
लक्ष्यभन्दा रु २३ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
बुधबार यस्तो छ विदेशि विनिमयदरको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
दुई खेमामा विभाजित भए जसपा
मन्त्रिपरिषद् बैठकः प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
सोमबार ९ हजार २७१ जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ?
यी ४६ जिल्लामा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित
कसरी सोमबार एकैदिन कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १३९ पुग्यो ?
कैलालीमा थप नौ सङ्क्रमितको मृत्यु